Imithombo yeendaba yoLuntu | Martech Zone
I-adage yakudala yemithombo yeendaba ebanzi kukuba i-eyeballs = imali. Ingcamango ephosakeleyo eyamkelwa ngokuqhelekileyo namhlanje yile Kaninzi iibhokhwe = Kaninzi imali. Sibona iindawo zosasazo zasekuhlaleni ezinje Digg, MySpace kwaye Facebook ithafa kunye nokuncipha ekuthatheni inxaxheba.
Ndiqinisekile ukuba zonke ezi ndawo ziya kutyhalela emva kwaye zikuxelele ukuba ziyakhula kwinani le amashiya. Yinyani leyo hayi Iindaba ezimnandi. Ukuba uthatho-nxaxheba lucwecwe ngeplate okanye uyalila kwaye inani labasebenzisi liyakhula, kukho umyalezo kwizibalo! Umsebenzisi ophakathi uchitha ixesha elincinci… okanye inani elonyukayo labasebenzisi bayayishiya inkonzo ngokupheleleyo.
Isilingo sokukhula sibe nkulu sihlala sikhona… eyeballs ezininzi zinokuzisa imali eninzi. Nangona kunjalo, umngcipheko wexesha elide wee-eyeballs ezingaphezulu unokungcwaba ukuthandwa kwendawo yakho, okanye uyenze ibe yeyona nto kujoliswe kuyo kakhulu kwi-SPAM. Ezi ndawo bekufanele ukuba zilumke ngakumbi ekuhlalutyeni ukukhula kwesiza sabo kuthelekiswa nefuthe kubasebenzisi abakhoyo. Ukuba benze njalo, ngebabefumanise ukuba, ukwandisa inzuzo, bekukho ubungakanani obulungileyo kwindawo yabo ukuba ingadluli ngaphaya kokuqhubeka nokujonga ukukhula.
I-Urban Blight = iMithombo yeendaba yeNtlalo
Ingxaki isisiseko esihle, kukungabikho kwedolophu. Xa ndihlala ePhoenix, eArizona unyaka ndafunda okuninzi malunga nobubi basezidolophini obabusenzeka. Emuva ngasekupheleni kweminyaka yama-80s, amadlelo asePhoenix ayekhula ngenqanaba elifunekayo, ekungekho namnye unokugcina isiseko-edolophini. Njengoko abamelwane babepakishwe kakhulu kwaye ukugcwala kwaba yingxaki, abantu bafudukela kwiindawo ezintsha.
Ezi ndawo zintsha zazinezikolo ezitsha, amakhaya amatsha, umhlaba kunye nemithi, kunye nabamelwane abakhulu - kungasathethwa ke ngomoya ococekileyo kunye neendawo ezininzi zokuhamba. Usondele kubamelwane bakho… ukusukela oko bebengangeni bengena ngalo lonke ixesha… bezimasa iminyhadala yoluntu kunye nokuthetha ngaphaya kocingo.
Ukusetyenziswa kweMidiya yoLuntu, ndiyakholelwa ukuba siyayibona into enye isenzeka. Undoqo we-Digg ujongene nobubi ngoku-abasebenzisi abancedileyo ekwenzeni inkonzo eyaye ithandwa kangaka bayahluthwa kwaye bafuna ezinye iindlela. Nge-MySpace, impendulo yayiyi-Facebook. Ngoku i-Facebook ikhule inkulu njenge-MySpace kunye namathafa afanayo ayenzeka-ngeli xesha ngesantya esikhawulezayo.
Bayaphi bonke? Ndicinga ukuba impendulo kukuhlaselwa Micro-iinethiwekhi ukuvela. Abantu bayashiya edolophini kwaye bafudukela kumadlelo.
IIMHO, Ezi ziindaba ezimnandi kubathengisi. Sebenzisa ubuchwephesha bokusasaza obubanzi obufikelela kwiibhola zamehlo ezininzi (kodwa abathengi abancinci) kuya kusiba kuncinci ukuthandwa. Ukufumana iisayithi ezincinci ezihlangabezana niche onqwenela ukufikelela kuyo ziya zithandwa ngakumbi. Ngokwam, ndifumana izicelo ezininzi ngakumbi kwingeniso yentengiso yeendawo ze-niche endizenzayo, njenge Iivenkile zomkhosi waselwandle.
Ixesha elichithwe kusenziwa amaphulo okuthengisa kuzo zonke ezi ndawo zinokwenza umahluko kwiindleko ze-ol ' ibhetshi kunye nokudubula ubuchule, nangona kunjalo. Ukuloba nge-dynamite kwakulula, kodwa kubonakala kuyindlela eyingozi kwi-Intanethi. Oku kufuna ukuba abathengisi batshintshe amaqhinga abo, abafuna ukuba basebenze nzima kumyalezo olungileyo ngexesha elifanelekileyo- kunye nokwakha ubukho obukhulu kwi-Intanethi nodumo olubalaseleyo.
Akukho namnye owathi kuya kuba lula!
tags: yonakaliseIzilwanyana zaselwandleImidiya yokuncokolazokunxibelelana
Feb 15, 2008 ngo-1: 27 PM
Imidiya yokuncokola lelona shishini lingalindelekanga. Uninzi lwewebhusayithi ezinje ngeMySpace okanye iFaceBook ekujoliswe kuyo ngabantu abancinci kwaye njengoko sonke sisazi ukuba olu hlobo lwabaphulaphuli lunokutshintsha ukuthanda kwabo ngokukhawuleza okukhulu.
Uyayikhumbula iGlobe? Inethiwekhi yokuqala yentlalontle- "i-dotcom bubble" eye yafikelela kwizigidi ezingama-200 zeedola kwaye yaphulukana nayo yonke into kusuku olunye.